Zimbabwe - 9News - Latest news and headlines from Australia and the world
Tourist slips to death moments after photo taken at Victoria Falls
A tourist was photographed walking by the cliff at one of the world's most famous waterfalls moments before he slipped and fell to his death.
Africa 1:31pm Jan 6, 2021
The number of elephants dying in western Zimbabwe from a suspected bacterial infection, possibly from eating poisonous plants, has risen to 22, and more are expected.
Africa 12:38pm Sep 3, 2020
wildlife 2:58pm Sep 2, 2020
You can buy the Zimbabwean Embassy in Canberra for $1.8m
Boasting 'great tenants', four bedrooms and two bathrooms the mega property has been posted on the housing market.
housing 11:39am Sep 24, 2019
Africa 1:16pm Sep 11, 2019
Former Zimbabwe President Robert Mugabe, who led the country for three decades, has died at aged 95.
World 3:13pm Sep 6, 2019
Zimbabwe to sell off its elephants
wildlife 12:26pm Jun 26, 2019
US tourist relives fighting off a hippo in Zimbabwe
A US woman has recounted how she fought off a hippopotamus that capsized her canoe and dragged her underwater.
Africa 10:46am Feb 1, 2019
Africa 4:46am Nov 17, 2018
election 9:12am Aug 3, 2018
Three dead in Zimbabwe as elections heighten tensions
World 4:16am Aug 2, 2018
Zimbabwe says election is clean
Zimbabwe's election took an uneasy turn when the opposition alleged results were not posted outside one-fifth of polling stations as required by law.
Zimbabwe 6:31am Aug 1, 2018
elections 7:02am Jul 31, 2018
In a surprise address to the nation after months of silence, Zimbabwe's former leader Robert Mugabe emerged just hours before the historic election.
Zimbabwe 6:28am Jul 30, 2018
Stadium bomb 'assassination attempt' on Zimbabwe president
explosions 8:12am Jun 24, 2018
Zimbabwe 7:00am Feb 15, 2018
Tributes flow for Melbourne mother killed in Zimbabwe
A Melbourne woman killed in a car accident with her young daughter in Zimbabwe has been remembered as a “enormous character”.
accidents 2:24am Dec 25, 2017
Zimbabwe's former President Robert Mugabe knew it was "the end of the road" days before he quit, and appeared relieved when he signed his resignation letter after 37 years in power, a Catholic priest who mediated talks leading to his ouster said Sunday.
Mugabe 6:42am Nov 27, 2017
Mugabe 10:47am Nov 24, 2017
World 10:31am Nov 22, 2017
Crowds in the Zimbabwe capital of Harare have taken to the streets to celebrate, following the resignation of Robert Mugabe.
Mugabe 4:36am Nov 22, 2017
Mugabe 6:30am Nov 21, 2017
World 10:34am Nov 20, 2017
World 7:53am Nov 20, 2017
Regional summit expected to formalise terms of Mugabe exit
Zimbabwe 7:56am Nov 17, 2017
USA 7:52am Nov 17, 2017
Without lifting a finger, the Trump administration may be witnessing the culmination of nearly two decades of US efforts to pry Zimbabwe from the powerful grasp of its authoritarian President Robert Mugabe. Yet with Mugabe's fate and Zimbabwe's political future in limbo, neither Trump nor previous administrations can claim credit or celebrate.
Zimbabwe 6:25am Nov 17, 2017
The Zimbabwe army's takeover of the state broadcaster and action against some members of President Robert Mugabe's government has been praised as a "bloodless correction".
World 5:03pm Nov 15, 2017
Robert Mugabe's son pours champagne over priceless watch
The son of Zimbabwean president Robert Mugabe has filmed himself pouring a bottle of expensive champagne over a $75,000 watch in a video posted to Snapchat.
Africa 10:55am Nov 9, 2017
The head of the World Health Organization revoked his appointment of Zimbabwe's President Robert Mugabe as a "goodwill ambassador" on Sunday after the choice drew widespread outrage.
World 7:36am Oct 23, 2017
'Offensive': Zimbabwe's Mugabe named WHO goodwill ambassador
World 3:47am Oct 22, 2017
south africa 10:27am Aug 21, 2017
World 9:24am Jan 7, 2017
Africa 3:21am Nov 19, 2016
Couple's late night swim with a crocodile
A late night swim has turned into a nightmare for a couple after a crocodile crawled into their pool at an African resort.
Africa 12:28pm Nov 1, 2016
Matildas make Olympics quarter-finals
The Matildas remain in the hunt for Australia's first Olympic football medal, battering Zimbabwe 6-1 in Salvador to progress to the quarter-finals.
rio olympics 8:36am Aug 10, 2016
Zimbabwean man pulls a massive python out of this car's engine
A family got a huge shock when they discovered a massive African rock python hiding under the bonnet of their car.
video 7:28pm Mar 6, 2016
Zimbabwe's 91-year-old President Robert Mugabe read the wrong speech at the opening of a new session of parliament on yesterday, repeating an address he gave to the legislature last month.
Politics 9:02am Sep 16, 2015
Man who got tusked by elephant said animal regretted barging into table
The man who was stabbed by an elephant's tusk as it barged into a table of safari holidaymakers says the animal later behaved like it "felt bad" for the close encounter.
buzz 12:35pm Sep 8, 2015
Elephant, buffalo and lion on menu for world's oldest leader's birthday
Two elephants, two buffalo, two sables, five impalas and a lion are all on the menu at the birthday celebrations for the world's oldest leader, Zimbabwe President Robert Mugabe.
Africa 9:06am Feb 18, 2015
Photographers asked to delete pictures after Zimbabwean President Robert Mugabe tumbles down stairs
Photographers have been asked to delete photos they captured of the 90-year-old Zimbabwean president, Robert Mugabe, tumbling down stairs.
World 12:25pm Feb 5, 2015
Elephant 'tramples poacher to death'
A suspected poacher has been trampled to death by an elephant in Zimbabwe, according to reports.
Zimbabwe 8:20am May 14, 2013